Home भर्खरै पहिलो चरणमा अमेरिकामा ६४ लाख व्यक्तिमा भ्याक्सिन लगाइने
त्यस तथ्याँकमा मोडर्नाले तयार पारेको खोप पनि समावेश छ । गत साता निकै प्रभावकारी रहेको भन्दै विवरण सार्वजनिक भएकाले मोडर्नाको खोपलाई पनि आपतकालीन प्रयोगमा ल्याइने सम्भावनाका बारेमा छलफल भइरहेको पर्नाले जानकारी दिए ।
फाइजरको खोप निकै चिसो अर्थात माइनस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यही कारण कम्पनीले १५ दिनसम्म खोपलाई सुरक्षित राख्न मिल्ने गरी विशेष भण्डारणको व्यवस्था मिलाएको छ । पर्नाले सबै अमेरिकी राज्यहरुलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा खोप वितरण गरिने पनि जानकारी दिए ।
गायक अनिल जोशी र गायिका अस्मिता अधिकारकिो स्वरमा रहेको नयाँ गीत सार्वजकि भएको छ । सार्वजनिक ‘जनकपुरे रेल’ बोलको गीतमा जगत तिरुवाले ¥याप हानेका...
प्रदेश ४ राजधानी समाचारदाता - January 11, 2021
मधुजंग पाण्डे - June 13, 2020
काठमाडौं । व्यापक जनआक्रोश र प्रदर्शनपछि सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएको...
रासस - March 1, 2020
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक गरिने मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी पूरा भएको छ...
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - November 21, 2020
जनकपुरधाम। आस्थाको महापर्व छठ पर्वअन्तर्गत व्रतालुले आज यहाँ उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पर्वको समापन गरेका छन् । मूल विधि चतुर्थीदेखि शुरू भई षष्ठीका दिन...
दोहोरी गीत प्रतियोगिता सेमीफाइनलमा
कला राजधानी समाचारदाता - March 10, 2020
लमजुङ । लमजुङको सुन्दरबजारमा आयोजना गरिएको सुन्दरबजार सांस्कृति महोत्सव– २०७६ का अवसरमा आयोजित जिल्ला भित्रका अन्तरवडास्तरीय दोहोरी गीत प्रतियोगिता सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - April 22, 2020
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज पार्टी स्थापना दिवसका...
Breaking News Roshan Shrestha - August 27, 2020
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका कार्यालय प्रमुख डीएसपीसहित २३जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले रिपोर्टअनुसार बुधबारसम्म...
काेराेनाकाे लक्ष्यण देखिए हवाइ यात्रा नगर्नुस्, टिकटकाे पैसा फिर्ता लिनुस् : बुद्ध एअर
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - March 3, 2020
काठमाडाैं । बुद्ध एयरले कोरोना भाइरसको मुख्य लक्षण रुघाखोकी तथा ज्वरो आएका यात्रुलाई विमानस्थलमा नआउन आग्रह गरेको छ । कम्पनीले आज एक सार्वजनिक सूचना...
पूर्वी नवलपरासीमा संक्रमित २ सय १० पुगे
प्रदेश ४ शोभा जिसी - June 26, 2020
नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीमा कोभिड १९ को संक्रमितको संख्या २ सय १० जना पुगेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव चापागाईका अनुसार...
डा. प्रकाश बुढाथोकी - January 10, 2021